Sida loo dar Album Art in Music Files in Dufcaddii
> Resource > Music > Sida loo dar Album Art in Music in Dufcaddii
Maktabadda Music aan farshaxanka album waa arki, laakiin wax yar caajiso. Haddii aad rabto inaad aragto qaab farshaxan aad jeceshahay, ama isticmaal tahay album u dhirta fiican iyo maamul ka, waxaana ay xal u weyn in ay kaa caawiyaan in aad ku darto tahay album in music in Dufcaddii haddii maktabadda music aad leedahay farshaxan aad u tiro badan album maqan helay . Wondershare TidyMyMusic u Mac ( Wondershare TidyMyMusic ) si toos ah u baadhaa macluumaad aad music, oo ay ka mid tahay album, faahfaahinta track iyo xitaa lyrics. Markaas Cudarada tahay album iyo macluumaad kale oo ay ku heeso si ay macluumaadka aad qaadan kartaa meel kasta. Ma sugi karo inaan arko sida ay u shaqayso? Halkan waxaan ku tag. Download First barnaamijkan hoos ku qoran, ka dibna hubi tutorial ah oo faahfaahsan.
1 dejinta maktabadda music aad
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad TidyMyMusic furo, waxaa si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood iyo dajiyaan oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood waqti kasta.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay music in aan la abaabulay Lugood, waxaad aadi kartaa oo eynaan Music in aad ku darto files music by toos ah waxayna jiidayeen galka music dhan ama guji badhanka File Open.
2 Search tahay album for files music
Riix badhanka Scan in madax iyo sax "Raadi Songs Allaha" checkbox, markaas barnaamijka bilaabi doonaan in ay baadhaan macluumaadka loogu talagalay oo dhan files music ee Dufcaddii ay ka mid yihiin farshaxanka album oo dheeraad ah. Waxaa wanaagsan in aadan u baahan tahay waxaad ka raadsan kartaa macluumaad loogu talagalay waxaad dhul kasta oo muusiko ah mid mid.
3 dar tahay album in files music in Dufcaddii
Waxaad tilmaami karo mid ka mid ah hees iyo arko in ay macluumaad khaanadda saxda ah. Markaas riix Codso ayaa salka ku jira in lagu daro tahay album iyo macluumaad kale oo si file music ah. Si Dufcaddii dari farshaxanka album, dooro dhowr files music iyo Riix Codso in samaysay shaqadan.
Fiiro gaar ah: TidyMyMusic ku siinayaa awood u leh inay wax ka bedel macluumaadka iskaa haddii aad rabto. Just guji icon Edit ku khaanadda saxda ah iyo jiidi image ah in meesha album farshaxanka. Wixii macluumaad qoraal kale, waxaad buuxin kartaa duurka tafatir ah.
Haddii aad isticmaasho TidyMyMusic in nadiifinta maktabadda music aad, waxa ay si fiican u samayn doonaa adigoo raadiya gabayadii labalaabka maktabadda music aad iyo aad suuragelinayo in ay tirtirto ee files music aan la rabin. Waa maxay xusid mudan halkan waa in aad maktabadda music habaysan loo qaadan karaa meel kasta oo macluumaad buuxa. Mar dambe ma ka waaban. Ha TidyMyMusic beddesho aad waayo-aragnimo music hadda ka dib.
Mid ka mid ah Click inay dajiyaan Multiple Lyrics in Lugood
Meesha aad ka heli Bollywood Songs Torrent
5 Best Music Download App u Mobile 2015
10 Free Music Downloader u Mac
Top 10 Composers Qadiimiga ah oo ay caan ku Music
10 Goobaha Best in Download Music